आइसोलेसनमा रहेका एक विरामीको मृत्यु, स्वाब रिर्पोट आउन बाँकी | रुपान्तरण
आइसोलेसनमा रहेका एक विरामीको मृत्यु, स्वाब रिर्पोट आउन बाँकी
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १६:१५
रुपन्देही । क्वारेन्टाइनमा बसेका एक जना विरामीको मृत्यु भएको छ । कोरोना भाइरसको आंशकामा रुपन्देहीको धागो कारखानामा स्थापना गरिएको कोरोना बिशेष अस्पताल(आइसोलेसन)मा बसेका सैनामैनाका ३७ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको हो । कोरोना भाईरसको लक्षण देखापरेपछि गत चैत १३ गते उनी क्वारेन्टाइनमा थिए ।
चैत्र ६ गते दुबईबाट नेपाल आएका उनलाई कोरोना संक्रमणको लक्षण देखापरेपछि १३ गते क्वारेन्टाइन ल्याइएको थियो । उनको स्वाब परीक्षणका लागि आज काठमाडौ पठाईएको थियो । उनलाई लामो समयसम्म ज्वरो आएको हुँदा मृत्युको कारण टाइफाइड भएको हुनसक्ने चिकित्सकको अनुमान छ ।
ति व्यक्ति चैत्र ६ गते दुबईबाट नेपाल आएका थिए भने घरमा ७ मात्र पुगेका थिए । उतैबाट ज्वरो आएको अवस्थामा घर आएका उनले नजिकको क्लिनिकमा १२ गतेसम्म उपचार गरारहेका थिए । उनी १३ गतेमात्र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आएका थिए ।
उनको मृत्यु के कारणले भएको भन्ने बिषयमा अझै खुल्न सकेको छैन् । उनको स्वाब परीक्षणको रिर्पोट आइनसकेको हुदा कारण खुल्न नसकेको हो ।
स्वाब परीक्षणका लागि आज बिहान मात्र काठमाडौं पठाइएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताए । स्वाबको रिर्पोट आएपछि मृत्युको कारण खुल्ने डा. थापाको भनाई छ ।